"Toyota Highlander": ezibekiweko lobuchwepheshe, ingaphakathi, design kanye nentengo
Zonke amasondo imoto "Toyota Highlander", naphezu ivelaphi Japanese, wajabulela funa oluqinile yasekhaya futhi emakethe US. By the way, indida eJapane akukho okokuqala. Kunezibonelo eziningi, njenge-Japanese bayatfutfuka izimoto zabo ngqo emakethe US. Kepha thina asiyikuzibonga ngaphezu aphazamise imininingwane, badlulele imoto off-road "Toyota Highlander."
Ukucaciswa kobuchwepheshe kanye nomklamo sici imoto Kuyaziwa ukuba baseMelika kusukela 2002. Yingaleso sikhathi-ke off the line umhlangano wahamba isizukulwane sokuqala lezi zimoto. Kodwa kungazelelwe, ngemva kweminyaka engu-5 ukuphathwa yokuthengisa ngempumelelo le nkampani yanquma ukuvala ukukhiqizwa zalolu hlobo locingo. Ngemva kwesikhathi esithile, ngo-2008, wazalelwa entsha "Toyota Highlander" (second generation). Ngalesi sikhathi, le Onjiniyela yanquma akupheleli emakethe US, anquma ukuphakela imishini eMpumalanga Yurophu. Ngemva kweminyaka engu-2 lezipho ezintsha isibe ngokusemthethweni ayatholakala e-Russia, okusho ukuthi ngeke ukwazi ukuthenga ngokusebenzisa "wabenza omnyama."
Ngaphandle, imoto has a lot of izingxenye Kuyefana nangomuntu "dade" abasebasha ngaphansi kwegama "Camry". Eqinisweni, isizukulwane Suv yesibili lwenzelwe ngokunembile ngenxa yalesi simo. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi kungani imoto has zicishe Izinsimbi kanye headlamps slanted ngokuthi "donor". Kodwa naphezu encane sidabukile-ucime Suv design kwasuka ehlukile, luyingxenye wesilisa. Lokhu kufakazelwa ngesivuno okukhulu ne-chrome ifaka kanye "izibhamu" protivotumanok. I engela ukuthambekela isiphephelo somoya kancane sehle. Ngakho Onjiniyela bakwazile hhayi kuphela ukunikeza imoto look sporty, kodwa futhi ukunciphisa hudula sokunciphisa umoya lapho zindiza. imvume okuphezulu kanye emthambekeni okusheshayo ukuphela emotweni kubonakala ethi: ". ngilungele anqobe noma isiphi isikhubekiso" Ukubheka ukubukeka emotweni, akazange asheshe uphawule ukuthi kungcono crossover, futhi nakakhulu ukuthi isisekelo salo umgibeli "Camry" sathathwa. Abaklami bafanelwe ngempela udumo - yakwazi ukwenza idolobha weqiniso ezine-wheel drive subcompact Suv.
"Toyota Highlander": ezibekiweko lobuchwepheshe
Ngaphansi hood izinto ezintsha elinamandla eziyisithupha cylinder esebenzisa u-petrol injini 3.5 amalitha, okuyinto Akumangalisi tiphindze lathathwa "Camry". Encwadini yakhe ifa 273 amahhashi ukuthi Ingasheshisa imoto 180 amakhilomitha ngehora. Yebo, "Toyota Highlander" Ukucaciswa kungukuthi izimoto, angeke kushiwo mayelana ukusetshenziswa kukawoyela. Ngokwesilinganiso, imoto uhlala lapho cishe 10-13 amalitha uphethiloli engamakhulu ngayinye.
Amanani "Toyota Highlander"
Ukucaciswa, njengoba sesibonile, ngokuhlanganyela umklamo ngempela ukwenza unaka umkhiqizo omusha. Futhi inani kwamukeleka ngempela uma ziqhathaniswa nozakwabo isiJalimane-Korean futhi mayelana 1 million 690 amawaka base, futhi ruble ayizigidi ezingu 1,975 ekucushweni esiphezulu. Yilokho kangakanani ngeke Kubiza "Toyota Highlander" eMoscow ngesikhathi umthengisi olusemthethweni.
Umculi Ukuthunga umshini: Izici kanye nokubuyekeza
Ikhofi nempela ngajwayelekile: 11 iziphuzo engavamile